Mba iji zere njem n'oge Coronavirus: San Marino nke kachasị njọ, China na-adaba na 12, Italy 8, USA 48
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Mba iji zere njem n'oge Coronavirus: San Marino nke kachasị njọ, China na-adaba na 12, Italy 8, USA 48
Airlines • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa ozi China • Ịtụ egwu • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • Akụkọ na -agbasa ozi Iran • Akwụkwọ akụkọ Italy • LGBTQ • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • Ịrụ ọrụ • Safety • Akụkọ South Korea na -agbasa • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche • Akụkọ kacha ọhụrụ na Vatican
Coronavirus ga-emetụta ndị mbata mba ụwa
Ka ọ dị ugbu a, 110,090 na-ebute ọrịa Coronavirus. Mmadụ 3831 nwụrụ na 62,301 natara na COVID-19
China ka bụ mba nwere ọnụọgụ kachasị nke ọrịa (80,738) mana dabere na ọnụọgụ nke obodo ma jiri ya tụnyere ọnụ ọgụgụ ndị na-efe efe, China bụ naanị ọnụọgụ 12, South Korea nọmba 6, Italy 8, Iran 10 na United States nke America ka na-ele anya na nchekwa dị na nọmba 48.
Etuola njem na njem nlegharị anya na enweghị njedebe n'isi. Otú ọ dị, imirikiti ụwa ka nwere nchekwa. Nke a bụ ndepụta nke mba 53 nwere ihe karịrị 1 nke Coronavirus kwa nde mmadụ. Mba abụọ nke Italytali gbara gburugburu, San Marino na Vatican City na-eduga ụwa, ya na obere obodo ọzọ Liechtenstein, nke dị n’etiti Austria na Switzerland bụ nọmba 3.
O doro anya na ọ nweghị mba ndị edepụtara ọnọdụ 1 ruo 5 nwere nde mmadụ nde, yabụ agbakọ ya. Vatican City nwere naanị otu ikpe, mana ọ nwere naanị mmadụ 5000, na-eme ya nọmba 2.
Mba kachasị njọ nwere ihe karịrị otu nde mmadụ bụ South Korea ugbu a, ndị Italy, Iran, na China na-esote.
Naanị mba 17 nwere ihe karịrị mmadụ 25 na-arịa ọrịa n’ime otu nde.
Ndepụta nke mba 53 nwere ihe karịrị 1 ọrịa kwa nde mmadụ na - ebute COVID-19:
Obodo Vatican: 1000
Iceland: afọ 146
Obodo Austria: 11.5
Taiwan nke 4.5
Ugwu North Macedonia: 1.4
Ndị ọkachamara njem na njem nleta: www.safertourism.com